Olima စစ်အေးတိုက်ပွဲ Hack ats Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
အိုလီမာ Duty Black Ops ခေါ်ဆိုမှု: စစ်အေးတိုက်ပွဲ Hack
စစ်အေးတိုက်ပွဲနောက်ဆုံးတွင် Olima ကိုအသုံးပြု။ စစ်မှန်သောဟက်ကာကဲ့သို့ချဉ်းကပ်နိုင်!
GamePron ၏ယာယီအသင်း ၀ င်ဖြစ်လာပြီး၎င်းသည်မည်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်ကိုကြည့်ပါ။ ယနေ့ ၁ ရက်ကုန်ပစ္စည်းသော့ကိုဝယ်ပါ။
သင်ကကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုကြိုးစားပြီးစမ်းသပ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ သို့တည်းမဟုတ်ငုပ်ဝင်လိုသည်ဖြစ်စေဤသည်မှာသင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ယနေ့တစ်ပတ်ကုန်ပစ္စည်းသော့ကိုဝယ်ပါ။
GamePron သည်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည့်အသင်း ၀ င်များအားမိသားစုထဲသို့ကျေးဇူးတရားဖြင့်အမြဲကြိုဆိုသည်။ ယနေ့ ၁ လကုန်ပစ္စည်းသော့ကိုဝယ်ပါ။
စစ်အေးတိုက်ပွဲသည်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဖူးသမျှတွင်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သော Call of Duty ဖြန့်ချိမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Olima စစ်အေးတိုက်ပွဲ Hack ကိုတီထွင်ခြင်းနှင့်ကိုက်ညီစေရန်တည်ဆောက်ခြင်းသည်သာအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ သင့်ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်မယ့် cheat မှဝင်ရောက်ခွင့်ရ!
COD Black Ops: စစ်အေးတိုက်ပွဲ Olima Hack သတင်းအချက်အလက်
စစ်အေးတိုက်ပွဲအတွင်းယှဉ်ပြိုင်မှုကိုအနိုင်ယူနိုင်အောင်ကူညီပေးမည့်ခိုင်မာသော cheat ကိုသင်ရှာဖွေနေပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်အေးတိုက်ပွဲ Olima Hack တွင်အဖွဲ့များအားလုံးကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဖြုတ်ချရန်လိုအပ်သည့်အင်္ဂါရပ်များရှိသဖြင့် ထပ်မံ၍ မကြည့်ပါနှင့်။ ယနေ့ခေတ် FOV စက်ဝိုင်းတပ်ဆင်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏စစ်အေးတိုက်ပွဲ Aimbot ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မည်သို့ဖြစ်သည်ကိုခံစားကြည့်ပါ! Intel နှင့် AMD CPU များအတွက်တီထွင်ထားသောဤ cheat သည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထွက်ပေါ်လာပြီး Nvidia နှင့် AMD အခြေပြု GPU များအတွက်လည်းသီးသန့်ဖြစ်သည်။ ဒီ cheat ဟာ Internal ဖြစ်ပြီးအသုံးပြုရတာအရမ်းလွယ်တယ်၊ ဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ဟက်ကာတစ်ယောက်တောင် GamePron မှာရှိတဲ့ဒီကိရိယာတွေကနေအကျိုးရနိုင်တယ်။
FOV Circle ပါ ၀ င်သည့်စစ်အေးတိုက်ပွဲ Aimbot၊ ချောမွေ့စွာရည်ရွယ်ခြင်း၊ အရိုး ဦး စားပေးခြင်းနှင့်သင်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်သင်၏ပြိုင်ဘက်များကို cakewalk ကိုဖယ်ရှားခြင်းကဲ့သို့သောထူးခြားသည့်လက္ခဏာများကိုရှာပါ။ ESP Hack (Extra Sensory Perception) လည်းပါ ၀ င်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏အသင်းဖော်များ၊ ရန်သူများနှင့်ပစ္စည်းများကိုနံရံများမှတဆင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ရန်သူ ESP (လေးထောင့်ကွက်)
ရန်သူသတင်း (အကွာအဝေး၊ အသင်းဖော်၊ နာမည်၊ ကျန်းမာရေး)
အဘယ်သူမျှမအထူး features တွေပေမယ့်မကြာမီလာမယ့်
COD Black Ops အကြောင်း: စစ်အေးတိုက်ပွဲ Olima Hack
COD Black Ops: စစ်အေးတိုက်ပွဲ Olima သည်စီးကြောင်းအထောက်အထားမဟုတ်သော်လည်းအခြားသူများထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာတိုးတက်လိုသောသူများအတွက်ခိုင်မာသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကြည့်ရှုသူများကိုဖျော်ဖြေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ချွေးနွေးထွေးစေသောဂိမ်းများအတွက်သင့်လက်များကိုယခင်ကထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်အေးတိုက်ပွဲ Olima Hack ကိုမစတင်မီ Protections ကိုသင်ပိတ်ထားချင်သည်၊ မှားယွင်းသောအပြုသဘောဆောင်သောကြောင့် cheat ကိုအလုပ်မလုပ်နိုင်အောင်တားဆီးနိုင်သည်။ ဒီ cheat ကို full-screen မှာသုံးနိူင်တယ်။ Controller ကို tool နဲ့အတူပြန်ပြောင်းနေသမျှကာလပတ်လုံးလည်းသုံးနိုင်တယ်။
COD Black Ops: Cold War Olima ကိုဘာကြောင့်အခြားပံ့ပိုးသူတွေဆီမှာသုံးရတာလဲ။
GamePron မှာဒီလိုမျိုးမဟုတ်တာက tool updates, ဒါမှမဟုတ် customer support တောင်မှမေးရင်အခြားပံ့ပိုးသူတွေကမင်းမျက်နှာမှာရယ်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါကမကဒါပေမယ့်ငါတို့ရဲ့ကိရိယာတွေအားလုံးကိုကြာရှည်စွာတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဆိုလိုတာကငါတို့ကသူတို့ကိုဂိမ်းများရဲ့အချိန်ဇယားတစ်လျှောက်မှာမွမ်းမံပေးလိမ့်မယ်။ COD Black Ops အတွက်အဆင့်မြှင့်တင်မှုတိုင်းရှိသည့်စစ်အေးတိုက်ပွဲများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်အေးတိုက်ပွဲ Olima hack အတွက်အဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည်သုံးစွဲသူများအား GamePron မှတဆင့်အကောင်းဆုံး hacking အတွေ့အကြုံကိုရရှိစေပြီး၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့အတွက်နာမည်ကောင်းတစ်ခုရရှိစေခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ COD Black Ops - Cold War Olima Hack တွင်တွေ့ရသော In-game menu သည်ဝင်ရောက်ရန်လွယ်ကူသည်သာမက hack ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ COD Black Ops: Cold War Olima Hack နှင့်ဆက်နွယ်နေသော settings အားလုံးနီးပါးကို aimbot မည်မျှလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်မည်၊ သင်၏ FOV စက်ဝိုင်းမည်မျှအထိညှိနိုင်သည်။ hack enabled နှင့်မည်သည့် ESP များကိုမြင်တွေ့နိုင်မည်ကိုပြင်ဆင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Cold War Cheat နှင့် ပတ်သက်၍ အခြားချိန်ညှိချက်များကိုချိန်ညှိပါ။ GamePron သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ hacks များအထူးသဖြင့် In-game menu တွင်လာသောအခါပြိုင်ဆိုင်မှုလွန်သွားပြီဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချပါ။
A1 ။ ဒီ cheat ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းပါသည်။ loader တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်။ “ အသုံးပြုနည်း” ကိုလိုက်နာပါ
A2 ။ မဟုတ်ပါ၊ ဤလှည့်စားခြင်းသည်စီးကြောင်းခိုင်လုံသောသက်သေမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းကိုကြည့်ရှုသူများအတွက်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
Q5 ။ အဆိုပါ cheat Warzone mode မှာအလုပ်လုပ်ပါသလား?
A5 ။ မဟုတ်ပါ၊ ဤလှည့်စားခြင်းသည် hwid spoofer မပါပါ။ COD အတွက်သီးခြား hwid spoofer ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်
A6 ။ ဟုတ်တယ်၊ မျက်နှာပြင်အပြည့်မှာသုံးနိုင်တယ်။
Q7 ။ ငါ Controller ကိုသုံးနိုင်သလား?
A7 ။ ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ရည်မှန်းချက်က remap tool တစ်ခုနဲ့အတူ remap လိုအပ်တယ်။
သင့်ကိုကူညီရန်ရွေးနုတ်ဖိုးများကိုအားကိုးရန်သင်ငြီးငွေ့သည်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ်“ အခြားဘက်ခြမ်း” တွင်မည်သို့ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုသင်မြင်ချင်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏ Cold War Olima Cheat ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တစ်ခုထက် ပို၍ နည်းလမ်းများစွာဖြင့်အနိုင်ရလိမ့်မည်။
အဆင်သင့် စိုးမိုး ကျွန်ုပ်တို့၏ COD BO Olima Hack နှင့်အတူ?